တဈကမ်ဘာလုံး ခရီးပတျသှားရငျတောငျ ဂပြနျမှာသာ မွငျတှနေို့ငျတဲ့အရာ (၉)ခု - Lifestyle Myanmar
Home General Knowledge တဈကမ်ဘာလုံး ခရီးပတျသှားရငျတောငျ ဂပြနျမှာသာ မွငျတှနေို့ငျတဲ့အရာ (၉)ခု
ဂပြနျ တီဗီစီးရီးတှေ၊ အနျနီမေးရှငျး ကာတှနျးကားတှေ မှတဆငျ့ ဂပြနျနိုငျငံရဲ့ ယဉျကြေးမှုကို သတိထားမိကွမှာပါ။ ဂပြနျလူမြိုးတှဟော ဆူရှီစားကွပွီး ဂပြနျအဆိုတျောတှရေဲ့ သီခငျြးတှကေို နားထောငျကွပါတယျ။ ကာရာအိုကဆေိုတာ အနောကျတိုငျးယဉျကြေးမှုလို့ ထငျရပမေယျ့ အမှနျတကယျက ဂပြနျလူမြိုး ဂီတပညာရှငျ Daisuke Inoue ကဂပြနျနိုငျငံကိုဘေးမွို့မှာ ၁၉၇၁ခုနှဈက စတငျတီထှငျခဲ့တာပါ။ Kara နဲ့ okesutora ဆို​​သော ဂပြနျစကားလုံးနှဈလုံးကို ပေါငျးစပျထားခွငျးဖွဈပါတယျ။ ဂပြနျက အစပွုတဲ့ ကာရာအိုကေ ယဉျကြေးမှုဟာ အာရှတိုကျသာမက ကမ်ဘာကို ပြံ့နှံ့သှားပမေယျ့ တခြို့အရာတှကေတော့ ဂပြနျနိုငျငံမှာသာ တှမွေ့ငျနိုငျဆဲပါ။ ဒါတှကေတော့ ဂပြနျနိုငျငံကလှဲရငျ ဘယျနိုငျငံမှာမှ မွငျရမှာ မဟုတျတဲ့ ယဉျကြေးမှုတှေ ဖွဈပါတယျ။
၁။ နိုငျငံတိုငျးမှာ လူကူးမဉျြးကွားက ကူးတဲ့အခါ လမျးကူးလို့ရပွီဆိုရငျ သင်ျကတေအဖွဈ အစိမျးရောငျလူပုံလေးကို ပွတတျကွပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ဂပြနျနိုငျငံက လမျးကူးသင်ျကတေမှာ အစိမျးရောငျလူပုံကို မွငျရမှာမဟုတျပါဘူး။ အဲ့ဒီ့အစား Dutch children စာအုပျကို ရေးသားသူ Dick Bruna ဖနျတီးထားတဲ့ ဇာတျကောငျတဈခုဖွဈသော Miffy ယုနျလေးကို မွငျရပါလိမျ့မယျ။ ဒီဇာတျကောငျက ဂပြနျယဉျကြေးမှုထဲကို ဘယျလိုရောကျနတောလဲ? အဖွကေ ရိုးရှငျးပါတယျ။ Miffy က နာမညျကွီး brand တဈခုဖွဈသော Hello Kitty မကျြနှာနှငျ့ ဆငျတူလို့ပါ။
၂။ နိုငျငံအတျောမြားမြားက ကျောဖီဆိုငျတှေ၊ ဘားတှမှော ထိုငျဖို့အတှကျ ကုလားထိုငျမွငျ့မွငျ့တှေ၊ ရိုးရိုးကုလားထိုငျတှကေို သုံးကွပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ဂပြနျလူမြိုးတှဟော နရောတိုငျးမှာ သကျတောငျ့သကျသာဖွဈမယျ့ အမွငျ့လောကျသာ သုံးကွပါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ ဂပြနျလူမြိုးကျောဖီဆိုငျတှကေ ကုလားထိုငျမြားဟာ သငျလဲလြောငျးနိုငျတဲ့ လကျတငျကုလားထိုငျ အနိမျ့လေးတှနေဲ့ အမြားကွီး ပိုတူနပေါတယျ။
၃။ စိတျဖိစီးမှုကို လြော့ခဖြို့နှငျ့ ခေါငျးကိုကျခွငျးကို ဖယျရှားဖို့အတှကျ ကြှနျတျောတို့ဟာ ရိုးရှငျးတဲ့ ဒီဇိုငျးဖွငျ့ပွုလုပျထားတဲ့ အနှိပျကိရိယာတှကေို သုံးကွပါတယျ။ ဂပြနျနိုငျငံမှာတော့ ရဘေဝဲပုံစံနဲ့တူသော လြှပျစဈပစ်စညျးတှကေို သုံးကွပါတယျ။
၄။ Pringles အမှတျတံဆိပျဟာ နိုငျငံအတျောမြားမြားမှာ နှဈပေါငျးမြားစှာ ရပေနျးစားခဲ့ပါတယျ။ Pringles အမှတျတံဆိပျ အာလူးကွျောဘူးတှကေို လူတိုငျးကွိုကျကွပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ Pringles ဟာ ဂပြနျနိုငျငံမှာ ဂပြနျလူမြိုးတှေ စားတဲ့ ခေါကျဆှဲ အမှတျတံဆိပျတဈခုသာ ဖွဈပါတယျ။
၅။ ကြှနျတျောတို့ နလေ့ညျစာစားတဲ့အခါ တဈယောကျတညျး ထိုငျစားတာ(သို့) ကျောဖီတဈခှကျသောကျဖို့ အနီးနားကကျောဖီဆိုငျကို တဈယောကျတညျး သှားသောကျတာက သာမနျအရာတဈခုလို့ ထငျရပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ဂပြနျလူမြိုးတှရေဲ့ ကျောဖီဆိုငျမြားမှာ တဈယောကျတညျးလာတဲ့ ဧညျ့သညျတှကေို ဝမျးနညျးမှုမခံစားရအောငျ ကွီးမားတဲ့ plush Moomins အရုပျကွီးတှေ ခထြားပေးလရှေိ့ပါတယျ။
၆။ ကမ်ဘာတဈလှားက ကျောဖီအရောငျးစကျတှေ အမြားစုမှာ ရိုးရာစက်ကူခှကျတှနေဲ့ သောကျစရာရှေးခယျြဖို့အတှကျ ခလုတျအတျောမြားမြားဟာ ဆငျတူပါတယျ။ ဂပြနျနိုငျငံမှာ အယျပလီကေးရှငျးတဈခုကနေ ကျောဖီတဈခှကျမှာလို့ရတဲ့ ဝနျဆောငျမှုနှငျ့ တခြို့အခြိနျတှမှော စတိုးဆိုငျကနေ ကောကျသောကျလို့ရမယျ့ ဝနျဆောငျမှုတှကေ အရမျးလူကွိုကျမြားလာပါတယျ။ ပလတျစတဈခှကျတှေ၊ စက်ကူခှကျတှအေစား သငျစိတျကွိုကျရှေးနိုငျတဲ့ ရောငျစုံကာလာပုလငျးတှေ ရှိပါတယျ။
၇။ တိရိစ်ဆာနျပုံ ကှကျကီးလေးတှေ စားဖူးကွမှာပါ။ မိကြောငျးပုံ၊ ယုနျပုံ၊ လိပျပုံလေးတှစေတဲ့
တိရိစ်ဆာနျပုံ ကှကျကီးလေးတှကေို စားရငျး ငယျငယျတုနျးက ပြျောဖူးခဲ့ကွပါတယျ။ ဂပြနျမှာတော့ ဒီလို ကှကျကီးလေးတှေ ရှိပမေယျ့ ပိုကီမှနျပုံကို သုံးကွပါတယျ။
၈။ နိုငျငံအတျောမြားမြားက လူတှဟော နယူးရီးယားလို၊ ခရဈစမတျလို အခါကွီးရကျကွီးတှမှော အရသာရှိတဲ့ အစားအစာတှအေမြားကွီး ခကျြပွုတျပွီး ပါတီပှဲကွီးတှေ ကငျြးပကွပါတယျ။ ဒါက ပုံမှနျ အစားအစာနဲ့ အထိမျးအမှတျပှဲ တဈခုကို ခှဲခွားထားတဲ့သဘော ဖွဈပါတယျ။ ဒါက ထူးဆနျးပမေယျ့ ဂပြနျလူမြိုးတှဟော ခရဈစမတျလိုညမြိုးမှာ သူမြားတှလေို ခရဈစမတျ ကွကျဆငျသားတှအေစား KFC ကွကျကွျောကိုသာ စားရတာ နှဈသကျကွပါတယျ။
၉။ ဆူရှီစားရငျ ကွုံဖူးမှာပါ။ ဆူရှီကို တူနှငျ့ကောကျယူတာနဲ့ ငါးမှာကပျထားတဲ့ ထမငျးက ကနျြခဲ့တာကို သတိပွုမိကွမှာပါ။ သို့သျော ဂပြနျလူမြိုးတှဟော ထမငျးကို ဆနျရှာလကာရညျ၊ ဆားနှငျ့ သကွားထညျ့ထားတဲ့ ဆော့ဈနှငျ့အတူ ရောလိုကျတာကွောငျ့ ဂပြနျမှာ ထိုကဲ့သို့သော ပွဿနာမရှိပါဘူး။
တစ်ကမ္ဘာလုံး ခရီးပတ်သွားရင်တောင် ဂျပန်မှာသာ မြင်တွေ့နိုင်တဲ့အရာ (၉)ခု
ဂျပန် တီဗီစီးရီးတွေ၊ အန်နီမေးရှင်း ကာတွန်းကားတွေ မှတဆင့် ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ ယဉ်ကျေးမှုကို သတိထားမိကြမှာပါ။ ဂျပန်လူမျိုးတွေဟာ ဆူရှီစားကြပြီး ဂျပန်အဆိုတော်တွေရဲ့ သီချင်းတွေကို နားထောင်ကြပါတယ်။ ကာရာအိုကေဆိုတာ အနောက်တိုင်းယဉ်ကျေးမှုလို့ ထင်ရပေမယ့် အမှန်တကယ်က ဂျပန်လူမျိုး ဂီတပညာရှင် Daisuke Inoue ကဂျပန်နိုင်ငံကိုဘေးမြို့မှာ ၁၉၇၁ခုနှစ်က စတင်တီထွင်ခဲ့တာပါ။ Kara နဲ့ okesutora ဆို​​သော ဂျပန်စကားလုံးနှစ်လုံးကို ပေါင်းစပ်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဂျပန်က အစပြုတဲ့ ကာရာအိုကေ ယဉ်ကျေးမှုဟာ အာရှတိုက်သာမက ကမ္ဘာကို ပျံ့နှံ့သွားပေမယ့် တချို့အရာတွေကတော့ ဂျပန်နိုင်ငံမှာသာ တွေ့မြင်နိုင်ဆဲပါ။ ဒါတွေကတော့ ဂျပန်နိုင်ငံကလွဲရင် ဘယ်နိုင်ငံမှာမှ မြင်ရမှာ မဟုတ်တဲ့ ယဉ်ကျေးမှုတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
၁။ နိုင်ငံတိုင်းမှာ လူကူးမျဉ်းကြားက ကူးတဲ့အခါ လမ်းကူးလို့ရပြီဆိုရင် သင်္ကေတအဖြစ် အစိမ်းရောင်လူပုံလေးကို ပြတတ်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဂျပန်နိုင်ငံက လမ်းကူးသင်္ကေတမှာ အစိမ်းရောင်လူပုံကို မြင်ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ အဲ့ဒီ့အစား Dutch children စာအုပ်ကို ရေးသားသူ Dick Bruna ဖန်တီးထားတဲ့ ဇာတ်ကောင်တစ်ခုဖြစ်သော Miffy ယုန်လေးကို မြင်ရပါလိမ့်မယ်။ ဒီဇာတ်ကောင်က ဂျပန်ယဉ်ကျေးမှုထဲကို ဘယ်လိုရောက်နေတာလဲ? အဖြေက ရိုးရှင်းပါတယ်။ Miffy က နာမည်ကြီး brand တစ်ခုဖြစ်သော Hello Kitty မျက်နှာနှင့် ဆင်တူလို့ပါ။
၂။ နိုင်ငံအတော်များများက ကော်ဖီဆိုင်တွေ၊ ဘားတွေမှာ ထိုင်ဖို့အတွက် ကုလားထိုင်မြင့်မြင့်တွေ၊ ရိုးရိုးကုလားထိုင်တွေကို သုံးကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဂျပန်လူမျိုးတွေဟာ နေရာတိုင်းမှာ သက်တောင့်သက်သာဖြစ်မယ့် အမြင့်လောက်သာ သုံးကြပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဂျပန်လူမျိုးကော်ဖီဆိုင်တွေက ကုလားထိုင်များဟာ သင်လဲလျောင်းနိုင်တဲ့ လက်တင်ကုလားထိုင် အနိမ့်လေးတွေနဲ့ အများကြီး ပိုတူနေပါတယ်။
၃။ စိတ်ဖိစီးမှုကို လျော့ချဖို့နှင့် ခေါင်းကိုက်ခြင်းကို ဖယ်ရှားဖို့အတွက် ကျွန်တော်တို့ဟာ ရိုးရှင်းတဲ့ ဒီဇိုင်းဖြင့်ပြုလုပ်ထားတဲ့ အနှိပ်ကိရိယာတွေကို သုံးကြပါတယ်။ ဂျပန်နိုင်ငံမှာတော့ ရေဘဝဲပုံစံနဲ့တူသော လျှပ်စစ်ပစ္စည်းတွေကို သုံးကြပါတယ်။
၄။ Pringles အမှတ်တံဆိပ်ဟာ နိုင်ငံအတော်များများမှာ နှစ်ပေါင်းများစွာ ရေပန်းစားခဲ့ပါတယ်။ Pringles အမှတ်တံဆိပ် အာလူးကြော်ဘူးတွေကို လူတိုင်းကြိုက်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Pringles ဟာ ဂျပန်နိုင်ငံမှာ ဂျပန်လူမျိုးတွေ စားတဲ့ ခေါက်ဆွဲ အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုသာ ဖြစ်ပါတယ်။
၅။ ကျွန်တော်တို့ နေ့လည်စာစားတဲ့အခါ တစ်ယောက်တည်း ထိုင်စားတာ(သို့) ကော်ဖီတစ်ခွက်သောက်ဖို့ အနီးနားကကော်ဖီဆိုင်ကို တစ်ယောက်တည်း သွားသောက်တာက သာမန်အရာတစ်ခုလို့ ထင်ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဂျပန်လူမျိုးတွေရဲ့ ကော်ဖီဆိုင်များမှာ တစ်ယောက်တည်းလာတဲ့ ဧည့်သည်တွေကို ဝမ်းနည်းမှုမခံစားရအောင် ကြီးမားတဲ့ plush Moomins အရုပ်ကြီးတွေ ချထားပေးလေ့ရှိပါတယ်။
၆။ ကမ္ဘာတစ်လွှားက ကော်ဖီအရောင်းစက်တွေ အများစုမှာ ရိုးရာစက္ကူခွက်တွေနဲ့ သောက်စရာရွေးချယ်ဖို့အတွက် ခလုတ်အတော်များများဟာ ဆင်တူပါတယ်။ ဂျပန်နိုင်ငံမှာ အယ်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုကနေ ကော်ဖီတစ်ခွက်မှာလို့ရတဲ့ ဝန်ဆောင်မှုနှင့် တချို့အချိန်တွေမှာ စတိုးဆိုင်ကနေ ကောက်သောက်လို့ရမယ့် ဝန်ဆောင်မှုတွေက အရမ်းလူကြိုက်များလာပါတယ်။ ပလတ်စတစ်ခွက်တွေ၊ စက္ကူခွက်တွေအစား သင်စိတ်ကြိုက်ရွေးနိုင်တဲ့ ရောင်စုံကာလာပုလင်းတွေ ရှိပါတယ်။
၇။ တိရိစ္ဆာန်ပုံ ကွက်ကီးလေးတွေ စားဖူးကြမှာပါ။ မိကျောင်းပုံ၊ ယုန်ပုံ၊ လိပ်ပုံလေးတွေစတဲ့
တိရိစ္ဆာန်ပုံ ကွက်ကီးလေးတွေကို စားရင်း ငယ်ငယ်တုန်းက ပျော်ဖူးခဲ့ကြပါတယ်။ ဂျပန်မှာတော့ ဒီလို ကွက်ကီးလေးတွေ ရှိပေမယ့် ပိုကီမွန်ပုံကို သုံးကြပါတယ်။
၈။ နိုင်ငံအတော်များများက လူတွေဟာ နယူးရီးယားလို၊ ခရစ်စမတ်လို အခါကြီးရက်ကြီးတွေမှာ အရသာရှိတဲ့ အစားအစာတွေအများကြီး ချက်ပြုတ်ပြီး ပါတီပွဲကြီးတွေ ကျင်းပကြပါတယ်။ ဒါက ပုံမှန် အစားအစာနဲ့ အထိမ်းအမှတ်ပွဲ တစ်ခုကို ခွဲခြားထားတဲ့သဘော ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါက ထူးဆန်းပေမယ့် ဂျပန်လူမျိုးတွေဟာ ခရစ်စမတ်လိုညမျိုးမှာ သူများတွေလို ခရစ်စမတ် ကြက်ဆင်သားတွေအစား KFC ကြက်ကြော်ကိုသာ စားရတာ နှစ်သက်ကြပါတယ်။
၉။ ဆူရှီစားရင် ကြုံဖူးမှာပါ။ ဆူရှီကို တူနှင့်ကောက်ယူတာနဲ့ ငါးမှာကပ်ထားတဲ့ ထမင်းက ကျန်ခဲ့တာကို သတိပြုမိကြမှာပါ။ သို့သော် ဂျပန်လူမျိုးတွေဟာ ထမင်းကို ဆန်ရှာလကာရည်၊ ဆားနှင့် သကြားထည့်ထားတဲ့ ဆော့စ်နှင့်အတူ ရောလိုက်တာကြောင့် ဂျပန်မှာ ထိုကဲ့သို့သော ပြဿနာမရှိပါဘူး။
Previous articleတကယျခဈြတဲ့သူနဲ့ ဆုံတှတေဲ့အခါ ကွုံရမဲ့ ကွညျနူးစရာအဖွဈအပကျြလေးတှေ
Next articleဘယျသူမှ မတိုကျတှနျးဘဲ လဖွေတျနတေဲ့ အတနျးဖျောကို ပွုစုပေးနတေဲ့ မူလတနျး ကလေး၂ယောကျ